AQRISO Qaabka Habraha IYO Naagaha Buur Buuran Loogo Raaxeeyo - iftineducation.com
AQRISO Qaabka Habraha IYO Naagaha Buur Buuran Loogo Raaxeeyo
iftineducation.com – AQRISO Qaabka Habraha IYO Naagaha Buur Buuran Loogo Raaxeeyo
Haweenka Buur buuran iyo kuwa caatada way ku kala duwanyihiin qaabka ciyaarta sariirta loogu tago waayo isku mid maba aha oo midan buuran waxaa meesha ku jira culeys farabadan.
Hadaba haweenka buur buuran ee gaaraya 40 sano iyo inta ka weyn waxay u baahanyihiin in si gaar ah loo fiiriyo oo iyaga u qalma si aad u qanciso. Hadaba talaabooyinka qaad.
Horta dharka kawada dhig marka hore ­Si fiican u fiiri jirkeeda oo dhan.Hadaad ku aragto meelo cabaadhyo ama laab laabyo ay habartu ku leedahay,halkaas si fiican carabka ula gal oo ka istiimo qacan iyo carab isugu dar. ­Markaad canbarkeeda u dhic rabto iyadoo jeefta ha u tagin ­
Waxaad dhahdaa lugaha kor u qaad ama adiga lugaheeda kor u qaad si aad si fiican ula hesho godka,Hadii kale waad ku fashilmeysaa biyahaana dhaqsa ka imanayo adigoon meelna waxba gaarsiinin wali. ­Markaad galin rabto ha wada galinin ee tartiib afka u saar hadana kasoo bixi ilaa ay ka cabaado oo ay ku dhedo eedo macaane i wda gali waayo markaas iyadaaba dhaqso biya bixi doonta.
hababka loo kiciyo dareenka dumarka